Bhalisa - I-US Ilungelo Lokwazi
I-US Ilungelo Lokwazi iyiqembu locwaningo elingenzi nzuzo elenza uphenyo oluqhakazile ukuveza ukuthi izintshisekelo ezinamandla zokudla nezimboni zamakhemikhali ziyithinta kanjani impilo yomphakathi. Sikholelwa ekutheni umphakathi ufanele ukwazi kabanzi ngokuthi ama-ejensi alawula umthetho asebenza kanjani - futhi awasebenzi - ukuze kuzuze umphakathi; nokuthi imali namandla ezinkampani kuthinta kanjani zombili izinqumo zocwaningo nezokulawulwa emazingeni ombuso nahulumeni. Kusukela ngo-2015, sesithole sazakhela umphakathi izinkulungwane zezimboni kanye nemibhalo kahulumeni equkethe imininingwane umphakathi unelungelo lokwazi.
Bhalisela i-newsletter yethu, i-Right to Know Review, ukufunda ngomsebenzi wethu wakamuva.
Thola izingqinamba ezedlule ze- Ukubuyekezwa Kwelungelo Lokwazi.
Indawo Yokugcina Yokudla>
Ingobo yomlando yokukhishwa kwezindaba>